Yemen oo go’aan adag kasoo saartay maraakiib Soomaaliyeed oo dekada Cadan kuxiran oo laga cabsi qabo in ay quusaan. |
Yemen oo go’aan adag kasoo saartay maraakiib Soomaaliyeed oo dekada Cadan kuxiran oo laga cabsi qabo in ay quusaan.
Hey’ad maamusha dekada magaalada Cadan ee dalka Yemen ayaa go’aankii ugu adkaa abid kasoo saartay maraakiib dowlada Soomaaliya ay leedahay oo dekadaasi ku xirnaa ilaa xilligii fowdada kuwaas oo ku daxaleestay dekada kuna dhaw in ay degaan oo ay dekada howlaheeda xanibaan.
Go’aankaan oo hay’adda maamusha dekedda Cadan ku wareejisay isaga oo qoraal ah Qunsulka Soomaaliya ee magaalada Cadan, Axmed Suudaan kadib kulan qunsulka iyo madaxda hay’adaasi ku dhexmaray gudaha Dekedda.
Waxaa lagu cadeeeyay go’aanka in mudo laba maalin ah maraakiibtaasi dowlada Soomaaliya ay uga soo jiidato dekada si loo ilaaliyo isha dhaqaalaha dalka Yemen oo dekadaasi ugu wenytahaay hadii marakiibtu ku quusaanna howlaha dekadu ay hakad gelayaan.
Maraakiibta oo afar ah ayaa waxaa lasheegay in mid kamid ah daxashii ka badatay oo uu duleeshaday kadibna biyo ka buuxsamen ilaa uu gaaro heer uu quusitaan ku dhawado arintaasi oo gurmad dekada laga sameeyay looga gaaray.
Maraakiibta afarta ah ee Soomaalidu leedahay ayaa xilligii fowdada waxaa bad baadisay dowlada Yemen oo shacabka Soomaaliyeed ay aad u mahadiyeen intii dalku uu jaha wareerka kujiray iyada oo kamid ah dalalka dadka Soomaaliyeed ay aad ugu barakeceen.
Si kastaba, Qunsulka Soomaalida ee Cadan ayaa waxa uu ka codsaday maamulka dekada in ay dul qaataan isaga oo balan qaaday in dowlada Soomaaliya marakiibteeda ay halkasi kasoo furan doonto inkasta oo uusan waqti u qaban.